Duulimaadyada Koonfurta Afrika hadda waxay la socdaan United Airlines iyo Airlink
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Koonfurta Afrika hadda waxay la socdaan United Airlines iyo Airlink
Guddiga Dalxiiska Afrika • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Codeshare -kan ayaa u fududayn doona macaamiishayada Waqooyiga Ameerika inay gaaraan Okavango Delta, Chobe, Beerta Qaranka ee Kruger iyo hudheelada ciyaarta gaarka loo leeyahay, Cape Town, Jidka Beerta, Swakopmund iyo Copperbelt, iyo kuwo kale.
United Airlines iyo Airlink waxay ku dhawaaqeen heshiis ganacsi oo ka caawinaya macaamiisha inay sahamiyaan Koonfurta Afrika.
Shuraakada cusubi waxay macaamiisha siisaa safar sahlan oo ay ku tagaan in ka badan 40 goobood oo ku yaal Koonfurta Afrika.
Macaamiisha United Airlines hadda waxay kasban karaan ama ku soo furan karaan mayl duulimaadyada United iyo Airlink.
Maanta, United Airlines iyo Airlink, oo ah diyaarad Koonfur Afrikaan ah, ayaa ku dhawaaqay heshiis cusub oo codeshare ah kaas oo macaamiisha siin doona xiriirro ka dhexeeya Mareykanka iyo Koonfurta Afrika marka loo eego isbahaysiga kale ee diyaaradaha. Heshiiska cusub, oo ku xiran oggolaanshaha dawladda, wuxuu bixin doonaa isku xirka joogsiga Mareykanka ilaa in ka badan 40 goobood oo ku yaal Koonfurta Afrika. Intaa waxaa dheer, United waxay noqon doontaa diyaaraddii ugu horreysay ee ku xirta barnaamijkeeda daacadnimo Airlink, taasoo u oggolaanaysa xubnaha MileagePlus inay kasbadaan oo ay furaan mayl marka ay ku safrayaan duulimaadyada Airlink. Wadashaqeyntaan cusub waxay ku dari doontaa iskaashigii hore ee United ay la lahayd South African Airways oo xubin ka ahaa Star Alliance.
“United waxay sii wadaysaa inay muujiso sida ay uga go’an tahay Afrika, iyadoo saddex duulimaad oo cusub oo qaaradda ah ku billaabaysa sannadkan oo keliya oo ay ku jirto adeeg cusub oo loo dirayo Accra, Ghana; Lagos, Nigeria iyo Johannesburg, Koonfur Afrika, ”ayuu yiri Patrick Quayle, oo ah madaxweyne ku xigeenka shabakadda caalamiga ah iyo xulafada United Airlines. “Oo hadda iyada oo loo marayo heshiiskayaga codeshare Airlink - oo ah iskaashiga ugu ballaadhan Koonfurta Afrika - macaamiishu waxay awoodi doonaan inay si sahal ah u sahamiyaan meelo badan oo baaldiyo ah oo ku yaal qaaradda oo dhan oo ay ku jiraan xiriirro sahlan Zambia, Zimbabwe iyo kuwo kale. ”
United Airlines ayaa sii waday inay ballaariso raadkeeda Afrika, iyada oo si toos ah loogu adeego afar goobood oo Afrikaan ah. Horaantii bishaan, United ayaa ku dhawaaqday duullimaadyada u dhexeeya Washington, DC iyo Lagos Nigeria inay bilaaban doonaan 29ka Nofembar, iyadoo ku xiran oggolaanshaha dowladda. Horaantii sanadkaan, United ayaa bilowday adeeg cusub oo u dhexeeya New York/Newark iyo Johannesburg, South Africa iyo inta u dhaxaysa Washington, DC iyo Accra, Ghana, oo la filayo inay maalin walba shaqeyso bishan December iyo Janaayo. Adeegga caanka ah ee United ee u dhexeeya New York/Newark iyo Cape Town, Koonfur Afrika ayaa sidoo kale dib u bilaaban doona 1 -da December.
“Waqooyiga Ameerika waa suuq muhiim u ah meelaheena. Codeshare -kan ayaa u sahli doona macaamiisheena Waqooyiga Ameerika inay gaaraan Okavango Delta, Chobe, Kruger National Park iyo hoyyada gaarka loo leeyahay, Cape Town, Garden Route, Swakopmund iyo Copperbelt, iyo kuwo kale, ”ayuu yiri Airlink Maamulaha Guud iyo Maareeyaha, Rodger Foster. Sidoo kale, codeshare micnaheedu waa in macaamiisheena 12 -ka dal ee Afrikaanka ah ee aan hadda u adeegno, ay si dhakhso leh oo aan kala go 'lahayn u geli doonaan dhammaan shabakadda United. "
Codeshare -kan cusub ayaa la hirgelin doonaa marka la ansixiyo dawladda ugu dambaysa.